Siyaabo wax ku ool ah oo loogu daabaco App-ka Android-ka ah Google Play Store | Martech Zone
Habka ugu fudud ee loo qaybiyo arjiga Android waa iyadoo la adeegsanayo dukaanka Google Play. Waa habka ugu adag ee ugu adag ee lagu gaaro macaamiil badan oo suurtagal ah. U wareejinta arjiga ugu horreeya ee Dukaanka Play ma aha wax dhib badan intaas, si fudud u raaci labada talobixin iyo dalabkaaga oo loo diyaariyey soo dejinta.
Soosaarayaasha barnaamijka Android waxay ku dadaalayaan inay ku siiyaan codsiga ugu fiican ee ay heli karaan dhagaystayaasha ugu badan. Waqti aad u badan ayaad ku qaadatay sameynta arjiga, waxaad ku guuleysataa dhammaan waxyaabaha suurtagalka ah waxaadna ku bixisaa 100% dalabkaaga. Waqtigaan la joogo, waa fursad ku habboon in loo diro dalabkaaga adduunka. In kabadan 1 bilyan oo ah macaamiisha firfircoon ee Android ayaa laga heli karaa meel kasta oo adduunka ah. Marxaladani waxay kuu dhawayn doontaa inaad la xiriirto kooxda aad xiiseyneyso.
Waxaa jira qiyaastii 2.47 milyan oo codsi oo laga heli karo Play Store oo qiyaastii 3739 codsi ayaa la bilaabay maalin kasta.
Tirakoobka, Tirada barnaamijyada ku kaydsan App App 2019
Qofna ma diidi karo muhiimadda iyo meel-u-dhigga Google Play Store ee aagga barnaamijyada moobiilka. Haddii ay dhacdo inaad u baahato inaad ogaato - sida loogu soo bandhigo arjiga Google play store, waqtigaas raadintaadu waxay ku egtahay halkan. Waxaa jira fikrad ah inaad raadsato taas si aad si wax ku ool ah ugu wareejiso arjiga google play store. Khadadkaas oo dhan, sidee baan u bilaabaynaa.
Qiimee dalabkaaga - Marka hore, waa inaad tijaabisaa dalabkaaga tiro isku mid ah oo ah dariiqooyinka aad awoodid oo aad boqolkiiba boqol u hubiso inay sifiican u shaqeyn doonto, ka hor intaadan ku wareejin arjiga dukaanka ciyaarta. Waxaad guud ahaan u isticmaali kartaa emulators sababtan awgeed. Isticmaalka qalabka ay maamusho Android wuxuu kuu soo gudbin doonaa nidaamka tijaabinta oo sii kordheysa. Waxay ku siin doontaa waayo-aragnimo ah inaad uga faa'iideysato dalabkaaga qalab dhab ah waxayna awood kuu siineysaa inaad jabiso wixii cayayaanka ah.
Cabirka kooban - Meesha aad ka sameyneyso dalabka, iskuday inaad yareyso cabirka dalabka. Cabirka dhabta ah ee codsi kasta runtii waa muhiim. Macaamiisha ma dareemayaan baahida loo qabo in la soo dejiyo codsi ku fadhiya boos ballaaran oo ku saabsan keydinta shixnad farsamo. Xaqiiqdii, xitaa Google laftiisa ayaa u oggolaanaya cabbirka cabirka illaa 50MB. Haddii dalabkaagu aad u weyn yahay, waxaad u baahan doontaa warbixinno horumarineed oo APK ah si aad ugu kala qaaddid qaybo si markaa loo wareejiyo. Waa inaad ku calaamadeysaa Google Play Console oo aad noqotaa qaybiyaha Play. In kasta oo xaqiiqda ay tahay in dalabkaagu ka gudbo qodobkan xadhiga, bartaas waxaad u baahan tahay inaad ka faa'iideysato diiwaanka Ballaarinta ee Android APK, si aad si wax ku ool ah ugu dirto dalabkaaga. Tani waxay u kala sooci doontaa dalabkaaga qaybo mid walbana wuxuu gaarayaa ilaa 2GB, taasoo siinaysa dalabkaaga 4GB dheeraad ah. Macluumaad Dheeraad ah ayaa lagu kaydiyaa Google Cloud waxaana laga soo kabsadaa meel kasta oo codsiga la soo bandhigo.
Hel Liisanka App - Waxba kuma yeeli doono inaad dalabkaaga oggolaato illaa aad dalabkaaga ugu wareejiso Google Play Store.
Xoogga saar rikoodhka APK oo leh ID Bundle iyo Nambarka Nooca - Waxaad u baahan tahay inaad sameysato warbixin APK ah oo aad ugu qoondeyn karto lambar kala duwan dalabkaaga kaasoo kaa caawin doona goor dambe marka aad u baahan tahay inaad ku wareejiso warbixin kale oo ku saabsan dalabkaaga. Aqoonsi Xidhmo ah oo sidoo kale loo yaqaan App ID oo loo adeegsado in laga sameeyo codsi nooc ka mid ah, waa qayb muhiim ah marka aad soo bandhigayso dalabkaaga. Tani waxay khuseyn kartaa dhammaan codsiyada loogu talagalay Android 5.0 ama ka badan.
Waa inuu ku Saxeexaa App-ka dhamaan Shahaadada Amniga - Kani waa markhaati wanaagsan oo loo calaamadeeyay inuu yahay APK oo aad u baahan doonto mar kasta oo aad codsi ugu qaybiso Play Store. Tan waxaa loogu yeeraa dukumiintiga JSK oo wata shahaado, tusaale ahaan, ereyga sirta ah ee Keystore.
Samee Liiska Dukaankaaga App - Dhajinta arjiga waa qeyb xoogan oo ka caawisa arjigaaga soo qaadashada soo degsashada. Qof kastaa maahan inuu waqtigiisa ku bixiyo dhajinta arjiga laakiin halkii uu ka bixi lahaa fursad aad tan ku sameyso kahor marinka codsiga android, waxaad ogaan doontaa natiijooyin yaab leh. Waxaad u baahan tahay inaad xoogaa xog ah siiso macaamiisha ku saabsan nooca adeegsigu yahay iyo astaamaha lagu garto.
Talaabooyinka Lagu Daabaco Codsiga Android ee Google Play
Ka hor intaadan u dirin codsi Android ah Google Play, hubi in wax walba la diyaariyey. Waxaad ubaahan doontaa xoogaa shaashad ah oo aad kuhesho arjigaaga (heer sare ah), qaab dhismeedka dalabka iyo, si cad, dukumiinti APK ah (arjiga laftiisa). Waxaa jira xayiraad daran oo ku saabsan cabirka arjiga. Cabirka ugu daran waa 100 Mbytes. Waa la doorbidi lahaa haddii ay ka yartahay 50 Mbytes, markaa macaamiisha ku nool aagagga leh shabakad cabsi leh waxay heli doonaan fursad ay ku adeegsadaan dalabkaaga. Waa kuwan hababka loogu qaybiyo codsi Android ah Google Play:
Samee koonto naqshadeeye Fur Google Play Console oo samee xisaab injineer. Immisa ayey ku kacaysaa in loo qaybiyo barnaamijka Android? Hawshu waa 25 $. Waxaad bixinaysaa hal mar, diiwaanka wuxuu ku siinayaa mudnaan inaad ku qaybiso isla codsiyada aad ubaahantahay markasta iyo goobkasta.
Nooca cinwaanka iyo sawirka arjigaaga - Waxaa caqli badan in laga fiirsado ka hor inta aan wax la qaybin. Markaad samaynaysid sahaminta raadinta ereyada saacadda si loogu daro muujinta arjigaaga. Waxa ugu horreeya ee isticmaaluhu ogaado waa magaca dalabka, wax soo jiidasho leh ayaa ka caawiya helitaanka dareenka isticmaale kasta! Diirad saariddu waa inay ahaataa mid madadaalo iyo magac sharraxaad leh.
Ku dar qabashada shaashada - Waa muhiim in la hubiyo in shaashadda shaashadda laga qaaday ay tahay mid tayo sare leh. Hubso in sawirradu muujinayaan xoogaa muhiim ah oo ku jira dalabkaaga, ama fikirka koowaad ee arjiga.
Go'aanso heerka qiimaynta dalabkaaga - Waqtigan xaadirka ah, waa inaad ka jawaabtaa dhowr su'aalood si loo go'aamiyo cabirka walaxda sheygaaga. Waxaa la filayaa inay xaddido carruurta ka soo degsashada dalabkaaga wixii ka baxsan fursadda inay ka kooban tahay wixii ku jira wixii ku weynaaday. Waxaad sifiican ugajawaabtaa runta kale waxaa lagaa diidi doonaa inaad kudajiso codsi Android barnaamijka Google Play.
Xulo kala soocida dalabka - Sidoo kale waa mid muhiim ah iyada oo loo cuskanayo in ay kor u qaadeyso khilaafkaaga soo degsashada. Fursada ka baxsan inaad doorato kala sooc aan habooneyn, shakhsiyaadka ma lahaan doonaan ikhtiyaarka ay ku arkaan fasalka ay noqon laheyd!
Xakamee arrimaha ku saabsan habka ilaalinta - Haddii ay dhacdo in dalabku adeegsado u adeegso macmiil kasta oo macluumaad gaar ah oo aad u baahan tahay inaad ku muujiso oo ay ku jirto habka ilaalinta ee aad ku hubinayso inaadan u isticmaalin macluumaadkan faa'iidada aad u leedahay. Istaraatiijiyadda amniga waa inaad u sheegtaa macaamiisha macluumaadka la soo ururin doono, sida xogtaan loo maareeyo iyo cidda ku soo wajahan.
Xaqiiqda ah in boqolkiiba 42 dadka adduunka ay adeegsadaan baraha bulshada ayaa sabab ugu filan inay noqoto barta ugu wanaagsan ee lagu xayeysiiyo.
Haddii aad u maleyneysay in kadib markaad si wax ku ool ah ugu wareejiso codsi Play Store waxaad ku nasan kartaa geedahaaga. Waxaa jira hawlo fara badan oo u baahan in la qabto horay u socoshada! Nolosha dalabkaaga ka dib daabacaadda waxay kuxirantahay adiga (ama koox adiga kuu shaqeysa). Waqtiga intiisa badan, taageerada ka dambeysa bilowga waxay cadeyneysaa gaadhista dalabka iyo sida ay faa'iido ugu lahayd adeegsadayaasha.
Jabsashada ugu fiican halkan waa inaad la jaan qaado macaamiishaada. Macaamiisha firfircoon ayaa ah hagaha ugu fiican. Waxay la wadaagi karaan jawaab celin xeel dheer isticmaaleyaasha dhabta ah ee lagu saxi karo sida ugu habboon. Haddii ay dhacdo inaad u isticmaasho dhaleeceynta macaamiisha inay tahay isha macluumaadka qaaliga ah waxaad helaysaa dhammaan fursadaha si aad u kobciso dakhliga oo aad uga dhigto mid guud oo dheeri ah
Fikrad Ma Leedahay?
Ma dooneysaa inaad horumariso barnaamijkaaga moobiilka? Nala soo xiriir, Sysbunny waa shirkad la raadsado kadib horumarinta barnaamijka mobilada oo soosaartay naqshad qurux badan, iyo horumarka barnaamijka moobilka degdega ah.
Tags: dukaanka google playapp mobiledaabacaan appdaabacaan barnaamijka moobiilkasysbunny
Xawaaraha: Dijitaal ahaan Isbadal Iibsi leh oo leh Awood Waxqabad